करिश्माले गरिन् एस.एल.सी. पास गर्ना साथ पार्टी परिवर्तन – Himshikharnews.com
करिश्माले गरिन् एस.एल.सी. पास गर्ना साथ पार्टी परिवर्तन
१९ असार २०७६, बिहीबार २१:०१
काठमाडौं । चलचित्र नायिका करिश्मा मानन्धर अर्को हप्ता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी प्रवेश गर्ने निश्चित भएको छ । उनले पार्टी प्रवेश गर्ने खुलासा रिपोर्टर्स नेपाल डट कमले गरेको थियो ।
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको संस्थापक रहेकी मानन्धरले डा.बाबुराम भट्टराईसँगको तीन वर्ष लामो राजनीतिक सम्बन्ध तोडेर नेकपामा प्रवेश गर्न लागेकी हुन् । बाबुराम समाजवादी पार्टी नेपालको अध्यक्ष छन् । करिश्माको राजनीतिप्रतिका मोह अझै भंग नभएको देखिएको छ ।
एक छोरीकी आमा करिश्मा सदावहार नायिका हुन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सुन्दर नायिकामा गनिएकी उनी बेला बेलामा विवादमा आइरहन्छिन् । करिश्मा केही वर्ष अमेरिकामा बसिन् । त्यहाँबाट फर्किएपछि उनी चलचित्रमा मात्र नभई राजनीतिमा पनि सक्रिय हुन थालिन् ।रिपोर्टर्सनेपाल डटकमबाट